musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Dzidzo Itsva Yekudzivirira Kurapa Gomarara muChina Yakaziviswa
Innovent Biologics, Inc. (Innovent), kambani yepasi rose biopharmaceutical inogadzira, inogadzira uye inoshambadzira mishonga yemhando yepamusoro yekurapa kenza, metabolic, autoimmune nezvimwe zvirwere zvikuru, uye NeoCura Bio-Medical Technology Co., Ltd. NeoCura), inotungamira AI-inogonesa RNA precision mushonga biotech kambani yakazvipira kuvaka yepasi rose yepamusoro RNA innovative drug platform, nhasi vazivisa pamwe chete kuti vapinda muchibvumirano chekudyidzana kuita chidzidzo chekiriniki muChina pamusoro pemusanganiswa therapy ye sintilimab. kubva kuInnovent uye yakasarudzika neoantigen vaccine NEO_PLIN2101 kubva kuNeoCura.
Innovent ichabatana neNeoCura kuChina kuongorora kuchengetedzwa, pharmacokinetics, pharmacodynamics uye kushanda kwekutanga kwemusanganiswa kurapa uchishandisa sintilimab kubva kuInnovent uye NEO_PLIN2101 kubva kuNeoCura mune varwere vekenza, kusimudzira budiriro yekiriniki yemubatanidzwa immunotherapy kune akawanda akasimba mabundu uye kugadzirira kuendesa. iyo Investigational New Drug (IND) application kuNational Medical Products Administration (NMPA) munguva pfupi iri kutevera.
Dr. Liu Yongjun, Mutungamiriri weInnovent, akati: “Tinofadzwa nepombi yeNeoCura yakasiyaniswa yeR&D nechikwata chetsvakiridzo chepasi rose, uye tinofara kupinda mumubatanidzwa uyu wehunyanzvi kuongorora kukosha kwekiriniki kwe sintilimab pamwe chete neoantigen vaccine yemamota akasimba. . Innovent ine pombi yakasimba ine simba rakasimba muimmunology uye cancer biology. Parizvino, tine mishonga mishanu yechizvino-zvino yakabvumidzwa uye yakatanga kuChina uye tichava nemishonga inodarika gumi ichaparurwa mumakore maviri-matatu anotevera. Yedu yakanyatsobatanidzwa chikuva yakaunganidza yakasimba R&D, kukura kwekiriniki uye kugona kwekutengesa uye yakanakira vanobatana kumba nekune dzimwe nyika. Isu tinotarisirawo kuenderera mberi nekuongorora mikana mitsva mukuwedzera zviratidzo uye kuwedzera kurapa kwakanaka kwe sintilimab pamwe chete neanoveli marapirwo ekurapa. Tinotarisira kubatana kwakakura uye kwakadzama pakati pemapato maviri mune ramangwana. “
Dr. Wang Yi, muvambi weNeoCura, akati: “Parizvino, majekiseni ekudzivirira neoantigen inzira yechinjo ichiri kusimukira yokurapa pasi rose. NeoCura yanga yakatarisana neR&D yemamota neoantigen vaccines kubva payakavambwa, vachitarisira kukunda matambudziko eiyo iripo immunotherapy mukurapa mabundu akasimba kuburikidza nekushandisa matekinoroji matsva. Kudyidzana neInnovent kuchaita basa rekubatana remunhu akasarudzika neoantigen vaccines uye monoclonal antibody zvinodhaka uye pamwe chete kuongorora kiriniki mhedzisiro yemubatanidzwa kurapa mukurapwa kwemamota akasimba, ayo anotarisirwa kuvandudza mwero wekupindura kwegomarara immunotherapy uye kuunza mikana mitsva. yemishonga yekusanganisa cancer."